Wararka - Farqiga u dhexeeya Qalabka SS304 iyo SS316
SS316 birta biraha ah ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa tareenka lagu rakibo harooyinka ama badda agteeda. SS304 waa aaladaha ugu caansan gudaha ama banaanka.
Maaddaama ay tahay AISI darajooyinka aasaasiga ah, farqiga u dhexeeya 304 ama 316 iyo 304L ama 316L waa kaarboon ka kooban.
Xaddiga kaarboonku waa 0.08% ugu badnaan 304 iyo 316 iyo 0.030% ugu badnaan noocyada 304L iyo 316L.
Dhammaan noocyada kale ee curiyeyaasha ayaa asal ahaan isku mid ah (heerka nickel ee 304 waa 8.00-10.50% iyo 304L 8.00-12.00%).
Waxaa jira laba bir oo Yurub ah oo nooca '304L' ah, 1.4306 iyo 1.4307. 1.4307 waa nooca ugu badan ee la bixiyo, kana baxsan Jarmalka. 1.4301 (304) iyo 1.4307 (304L) waxay leeyihiin iskuxirka kaarboonka 0.07% ugu badnaan iyo 0.030% ugu badnaan, siday u kala horreeyaan. Heerarka chromium iyo nickel waa isku mid, nikkel labada fasal oo leh ugu yaraan 8%. 1.4306 asal ahaan waa darajo Jarmal ah waxayna leedahay 10% ugu yaraan Ni. Tani waxay yareyneysaa maadada ferrite ee birta waxayna ogaatay inay lagama maarmaan u tahay howlaha kiimikada qaarkood.
Darajooyinka yurub ee noocyada 316 iyo 316L, 1.4401 iyo 1.4404, waxay u dhigmayaan dhammaan walxaha leh kaladuwanaanta kaarboonka ee 0.07% ugu badnaan 1.4401 iyo 0.030% ugu badnaan 1.4404. Waxa kale oo jira noocyo Mo sare ah (2.5% ugu yar Ni) ee 316 iyo 316L ee nidaamka EN, 1.4436 iyo 1.4432 siday u kala horreeyaan. Si loo sii murjiyo arrimaha, waxaa kale oo jira darajo ah 1.4435 oo labaduba ku sarreeya Mo (2.5% ugu yar) iyo Ni (12.5% ​​ugu yar).
Saamaynta kaarboonka caabbinta daxalka
Kaarboon-ka 'noocyada' hooseeya (316L) ayaa loo sameeyay inay beddelaan 'heerarka' (316) heerka kaarboonka si looga gudbo halista isku-darsamidda 'iskudhafan' (bololka alxanka), taas oo loo aqoonsaday inay dhibaato tahay maalmaha hore ee codsiga. birtan. Tani waxay sababi kartaa haddii birta lagu hayo heerkulka u dhexeeya 450 illaa 850 ° C muddo daqiiqado ah, taas oo ku xidhan heerkulka oo markii dambe loo soo bandhigi karo bay'ado waxyeello u geysanaya. Xadgudubka ayaa markaa ka dib dhaca xuduudaha hadhuudhka.
Haddii heerka kaarboonku uu ka hooseeyo 0.030% ka dib daxalkan 'intercrystalline corrosion' ma dhacayo ka dib soo-gaadhista kuleylkan, gaar ahaan xilliyada sida caadiga ah lagu soo arko aagga kuleylka saameeyay ee walxaha qaybaha 'qaro weyn' ee birta.
Saamaynta heerka kaarboonka ee ku xirnaanta
Waxaa jira aragti ah in noocyada kaarboonka yar ay ka sahlan yihiin alxanka noocyada kaarboonka caadiga ah.
Uma muuqato inay jirto sabab cad oo tan la mid ah iyo kala duwanaanshaha ayaa laga yaabaa inay la xiriiraan xoogga hoose ee nooca kaarboon yar. Nooca kaarboon-ka hooseeya wuu fududaan karaa qaabeynta iyo sameynta, taas oo iyaduna sidoo kale saameyn ku yeelan karta heerarka culeyska haraaga ee ka haray birta ka dib sameynta iyo ku habboonaanta alxanka. Tani waxay sababi kartaa 'heerka' noocyada kaarboonku inay u baahan yihiin xoog badan si ay ugu hayaan booskooda markii loo xiro alxanka, oo ay u janjeeraan inay dib u soo laabtaan haddii aan si fiican loogu hayn meesha.
Qalabka alxanka ee labada noocba waxay ku saleysan yihiin kaarboon yar oo kaarboon ah, si looga fogaado khatarta isku-xoqidda qashinka ee isku-xirka walxaha adag ama ka-faafidda kaarboonka birta waalidka (ku xeeran).
Shahaadada laba-geesoodka ah ee kaarboonnada kaarboonku ka kooban yahay
Shirkadaha ganacsiga ee la soo saaro, iyadoo la adeegsanayo habab bir-sameynta hadda jirta, ayaa badanaa loo soo saaraa sida nooca kaarboonku yar yahay oo ah arrin dabcan sababo la xiriira koontaroolka hagaagsan ee bir-sameynta casriga ah. Waxsoosaarka alaabada birta ah ee la dhammeeyay waxaa badanaa loo soo bandhigayaa suuqa 'laba shahaado' si loogu qoro labada astaamo iyada oo markaa loo isticmaali karo been abuur tilmaamaya labada darajo, heerar gaar ah.
BS EN 10088-2 1.4301 / 1.4307 heerka Yurub.
ASTM A240 304 / 304L AMA ASTM A240 / ASME SA240 304 / 304L heerarka markabka cadaadiska Mareykanka.
BS EN 10088-2 1.4401 / 1.4404 heerka Yurub.
ASTM A240 316 / 316L AMA ASTM A240 / ASME SA240 316 / 316L, heerarka maraakiibta cadaadiska Mareykanka.
Saxanka Saldhig gacmeed, Dahaarka ahama Steel wiishka, Qeybta jaranjarada jaranjarada, Ahama cuskado, Cuskado, Qaybaha toosan ee gacanta,